Shir looga hadlayay adkeynta nabadda oo lagu soo gabagabeeyay Gaalkacyo – Radio Muqdisho
Shir muddo labo maalmood ah ka socday magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug oo uu soo qaban qaabiyay urur Goboleedka IGAD xafiiskiisa Soomaaliya ayaa maanta la soo gaba gabeeyay iyadoo shirkaasi diiradda lagu saarayay ,fulinta heshiisyadii dhinaca nabadda ee ay dhawaan wada gaareen dhinacyada Puntiland iyo Galmudug ,adkeynta xabbad joojinta iyo dhismaha nabadda.
kulanka ayaa waxaa ka qeybgalay Gudoomiyahaasha Gobolka Mudug iyo degmada Gaalkacyo ee Puntiland iyo Galmudug ,xubno ka socday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya iyo xubnaha guddi isku dhaf ah oo hore loo magacaabay si ay uga shaqeeyaan nabadda Gaalakacyo iyo Mas’uuliyiinta IGAD oo iyagu kulanka soo qaban qaabiyay.
Aragtiyo kala duwan iyo talooyin dhaxalgal ah oo ku saabsan ilaalinta iyo wadajirka buslahada Gaalkacyo ayaa kulanka leysuku dhaafsaday iyadoo dhinacyada ay wada qireen sida loogu baahan yahay wada daganaashaha dadka degaanka.
Mas’uuliyintii ka socotay dhanka dowladda federaalka ah,maamulada Galmudug iyo Puntilnad ayaa isku afgartay in si dhow ay uga wada shaqeeyaan si wax looga qabto baahiyaha dhanka bani’aadannimada ah iyo dhanka dhaqaalaha ee kajira degaanka.
Urur goboleedka IGAD ayaa ugu dambeyn ugu baaqay dhinacyada Puntiland iyo Galmudug inay awood dheeraad ah siiyaan Guddiga isku dhafka ah ee hore loo magacabay si ay si ay xal kama dambeys ah ugu helaan muranka Gaalkacyo iyadoo IGAD uga mahadcelisay beesha caalamka uga mahadcelisay sida ay uga qeyb qaateen dajinta xiisadihii kajiray magaalada Gaalkacyo iyo sida ay uga go’an tahay xal u ehlista murankaasi oo noqoday mid soo laa laabtay.